“Mwari Ari Pese Pese”—Ndizvo Here?
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Alur Amharic Arabic Arabic (Lebanon) Armenian Armenian (West) Assamese Azerbaijani Basque Batak (Karo) Batak (Toba) Belize Kriol Bengali Biak Bicol Bislama Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chavacano ChiChangana (Mozambique) ChiKalanga (ChekuBotswana) ChiKaren (S'gaw) ChiRomani (ChechiVlax, Russia) ChiSutu (Lesotho) ChiSutu (South Africa) ChiTetun Dili Chichewa Chin (Hakha) Chinese (Shanghainese) Chinese (Sichuanese) Chinese (Yunnanese) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chol Chuvash Cibemba Cinamwanga Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Dutch Efik Emberá (Catío) Emberá (Chamí) Estonian Ewe Fante Faroese Fijian Finnish Fon Frafra French Ga Georgian German Greek Greenlandic Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hindi (Roman) Huastec (San Luis Potosi) Hungarian Hunsrik Iban Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Kabuverdianu Kachin Kamba Kannada Kazakh Kazakh (Arabic) Kekchi Khakass Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwanyama Kyangonde Laotian Lari Latvian Lingala Lithuanian Low German Luganda Luo Luvale Luxembourgish Macedonian Macua Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Mapudungun Marathi Mari Mauritian Creole Maya Mingrelian Mixtec (Guerrero) Mizo Mongolian Moore Mutauro Wemasaini wechiFrench Mutauro Wemasaini wechiSpanish Mutauro Wemasaini wokuArgentina Mutauro Wemasaini wokuBritain Mutauro Wemasaini wokuChile Mutauro Wemasaini wokuColombia Mutauro Wemasaini wokuEcuador Mutauro Wemasaini wokuGermany Mutauro Wemasaini wokuGuatemala Mutauro Wemasaini wokuIndonesia Mutauro Wemasaini wokuIsrael Mutauro Wemasaini wokuItaly Mutauro Wemasaini wokuJapan Mutauro Wemasaini wokuMexico Mutauro Wemasaini wokuParaguay Mutauro Wemasaini wokuPoland Mutauro Wemasaini wokuRussia Mutauro Wemasaini wokuSlovakia Mutauro Wemasaini wokuSouth Africa Mutauro Wemasaini wokuVenezuela Myanmar Nahuatl (Huasteca) Ndau Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngabere Niuean Norwegian Nyungwe Nzema Okpe Oromo Ossetian Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Pidgin (West Africa) Polish Pomeranian Portuguese (Brazil) Portuguese (Portugal) Punjabi Punjabi (Shahmukhi) Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quechua (Huallaga Huánuco) Quiche Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Quichua (Tena) Rarotongan Romanian Romany (Argentina) Romany (Macedonia) Romany (Macedonia) Cyrillic Romany (Serbia) Ronga Russian Réunion Creole Samoan Sango Sepedi Sepulana Serbian (Cyrillic) Serbian (Roman) Setswana Seychelles Creole Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Sunda Swahili Swati Swedish Tagalog Tahitian Talian Tamil Tandroy Tankarana Tarascan Tatar Telugu Thai Ticuna Tigrinya Tiv Tojolabal Tongan Tsonga Turkish Turkmen Twi Tzeltal Tzotzil Ukrainian Umbundu Urdu Urhobo Uzbek Uzbek (Roman) Valencian Venda Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Welsh Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zapotec (Lachiguiri) Zulu
Audio Nzira dzokudhaunirodha zvakarekodhwa Mwari Ari Pese Pese Here?
Mwari anogona kuona zvinhu zvese uye kuita zvaanoda chero kupi zvako kwaanenge asarudza. (Zvirevo 15:3; VaHebheru 4:13) Kunyange zvakadaro, Bhaibheri haridzidzisi kuti Mwari ari pese pese kana kuti anowanikwa muzvinhu zvese. Asi rinoratidza kuti iye munhu chaiye uye kuti ane nzvimbo yaanogara.
Zvakaita Mwari: Mwari mweya. (Johani 4:24) Vanhu havakwanisi kumuona. (Johani 1:18) Mashoko ari muBhaibheri akataurwa nevanhu vakaratidzwa zvakaita Mwari, anobudisa pachena kuti ane nzvimbo yake yaanogara. Hapana paanonzi ari pese pese.​—Isaya 6:1, 2; Zvakazarurwa 4:2, 3, 8.
Kunogara Mwari: Mwari anogara kudenga kwatisingakwanisi kuona, uko kwakasiyana nezvimwe zvinhu zvakasikwa zvatinoona. Mwari ane ‘nzvimbo yake yaanogara’ kudenga ikoko. (1 Madzimambo 8:30) Bhaibheri rinotaura kuti pane imwe nguva, ngirozi ‘dzakapinda kuti dzimire pamberi paJehovha,’ * zvichiratidza kuti Mwari ane nzvimbo chaiyo yaanogara.​—Jobho 1:6.
Kana Mwari asiri pese pese, anokwanisa kuva nehanya neni here?
Ehe. Mwari ane hanya chaizvo nemunhu mumwe nemumwe. Kunyange zvazvo achigara kudenga, anoona vaya vari panyika vanonyatsoda kumufadza, uye anovabatsira. (1 Madzimambo 8:39; 2 Makoronike 16:9) Ona kuti Jehovha anoratidza sei kuti ane hanya nevanhu vake vanomunamata nemwoyo wese:
Paunonyengetera: Jehovha anogona kunzwa munyengetero wako panguva iyoyo chaiyo yaunenge uchitonyengetera.​—2 Makoronike 18:31.
Paunenge wakaora mwoyo: “Jehovha ari pedyo nevaya vakaora mwoyo; anoponesa vaya vakasuruvara.”​—Pisarema 34:18.
Paunenge uchida kutungamirirwa: Jehovha ‘achaita kuti uve nenjere uye achakurayiridza’ achishandisa Shoko rake, Bhaibheri.​—Pisarema 32:8.
Nhema dzinotaurwa nevanhu pamusoro paMwari
Zvavanotaura: Mwari angori pese pese nemuzvinhu zvaakasika.
Chokwadi nezvenyaya iyi: Mwari haagari panyika kana kuti chero pai zvapo patinogona kuona nemaziso. (1 Madzimambo 8:27) Ichokwadi kuti nyeredzi nezvimwewo zvakasikwa ‘zvinozivisa kubwinya kwaMwari.’ (Pisarema 19:1) Asi Mwari haagari muzvisikwa zvake kungofanana nemunhu anodhirowa uyo asingagari muchinhu chaanenge adhirowa. Asi tinogona kuona unyanzvi hwake nekutarisa chinhu chaadhirowa. Ndizvowo zvakaita Mwari, ’kunyange zvazvo asingaoneki,’ tinogona kuona simba rake, uchenjeri uye rudo rwake muzvinhu zvaakasika.​—VaRoma 1:20.
Zvavanotaura: Kuti Mwari akwanise kuziva zvinhu zvese uye kuti anzi ane simba rese, anofanira kunge ari pese pese.
Chokwadi nezvenyaya iyi: Mweya mutsvene waMwari isimba rake rinoita basa. Achishandisa mweya wake mutsvene, Mwari anogona kuziva uye kuita chero chinhu, chero kupi zvako, panguva chero ipi zvayo asi iye asiri kunzvimbo yacho.​—Pisarema 139:7.
Zvavanotaura: Pisarema 139:8 inodzidzisa kuti Mwari ari pese pese painoti: “Kudai ndaikwira kudenga, munenge muriko,
kudai ndaiwaridza mubhedha wangu muGuva, onai! munenge murimo.”
Chokwadi nezvenyaya iyi: Rugwaro urwu harusi kutaura nezvekunogara Mwari. Rwakanyorwa senhetembo inotidzidzisa kuti hapana nzvimbo iri kure zvekuti Mwari haagoni kutibatsira kana tiri ikoko.
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Mwari Ari Pese Pese Here?
ijwbq nyaya 123